Erik Ten Hag Oo Muhiimada Saxiixiisa Ugu Horeeya Ka Dhigtay Frenkie De Jong
HomeWararka CiyaarahaErik ten Hag oo Muhiimada Saxiixiisa ugu horeeya ka dhigtay Frenkie de Jong
June 19, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Erik ten Hag ayaa doonaya in Manchester United ay si deg deg ah u xalliso saxiixa Frenkie de Jong sababtoo ah wuxuu u arkaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland inuu yahay ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee la keeni karo Old Trafford.
Maamulaha cusub ee United ma doonayo in kooxdu ay ku kharash garayso lacagaha suuqa kala iibsiga bartilmaameedyada aan muhiimka ahayn – xitaa ciyaartoyda aan qandaraaska ku jirin sida Christian Eriksen – maadaama uu doonayo in inta badan miisaaniyada suuqa kala iibsiga lagu jiheeyo De Jong.
Marka De Jong laga soo saxiixdo Barcelona, ​​wuxuu markaas go’aamin doonaa ciyaartoyda uu u baahan yahay inta ka hartay miisaaniyadda. Waxa ay farta ku fiiqday dalab cusub oo ay United ka gudbisay isbuucaan, iyadoo Barcelona ay dalbaneyso 69 milyan ginni, iyadoo United ay soo bandhigtay 56 milyan ginni.
United waxa ay rajaynaysay in Barca ay quus ka istaagto inay iibiso sababtoo ah xaaladdooda dhaqaale ee khatarta ah iyo deynta sii kordhaysa ee ku dhow £1bn. Kooxda reer Catalan waa inay u soo gudbiso xisaabaadka La Liga dhamaadka bisha June, taasoo go’aamin doonta xadka kharashaadka xilli ciyaareedka soo socda, taasoo la micno ah in wareejinta degdega ah ay u muuqatay inay faa’iido u leedahay maadaama ay gacan ka geysan doonto isku dheelitirka kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, xubnaha Barca ayaa usbuucii hore ansixiyay heshiis lacag aruurin ah oo dhan £600m, deyn bixinta boqolkiiba xuquuqda TV-ga mustaqbalka iyo xuquuqaha baayacmushtarka si ay u daboosho inta badan deynta.